Ungaluvula kanjani amachweba futhi uthuthukise ukuxhumana kwakho kumageyimu evidiyo | Izindaba zamagajethi
Ungavula kanjani amachweba futhi uthuthukise ukuxhumana kwakho emidlalweni yevidiyo
UMiguel Hernandez | | General, Izifundiswa
Imidlalo emikhulu yevidiyo efana I-Fortnite, iCall of Duty: Indawo Yezimpi noma i-PUBG Phakathi kwabanye, impumelelo yabo bayisekela eqinisweni lokuthi bakhululeke ngokuphelele. Kodwa-ke, njengoba badinga idlanzana labasebenzisi abadlala ngasikhathi sinye futhi kwezinye izimo ngisho ne-corssplay, okungukuthi, amapulatifomu ahlukile adlala esimweni esisodwa. Lokhu kwenza ikhwalithi yokuxhuma ibaluleke kakhulu kulezi zinhlobo zemidlalo lapho kubalwa khona umzuzwana ngamunye. Sichaza ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-DMZ Host ukuvula wonke amachweba futhi uthuthukise kakhulu ikhwalithi yokuxhumeka kwakho lapho udlala imidlalo yevidiyo. Uzokwazi ukuhlola amakhono akho kalula.
1 Yini i-DMZ Host futhi yenzelwa ini?
2 Ungayisetha kanjani i-DMZ ukuze ithuthukise i-lag
3 Ungayabela kanjani i-DMZ ku-PlayStation 4 yakho noma i-Xbox One
3.1 Nika i-IP engaguquki ku-PS4 yethu
3.2 Nika i-IP engaguquki ku-Xbox One
4 Ungakuthuthukisa kanjani ukuxhumana kwami ​​emidlalweni yevidiyo
Yini i-DMZ Host futhi yenzelwa ini?
Lapho sidlulisa okuqukethwe kumzila wethu kudlula ochungechungeni lwezihlungi ezenza ukuxhumana kwethu nosuku nosuku kuphephe kakhudlwana. Lokhu ngokusobala kukhiqiza i- "ping" noma abasebenzisi begeyimu yevidiyo kwesinye isikhathi abayibiza nge- "lag". Ngeke nakanjani sikuthole lokhu kuyisithiyo kuzo zonke izimo, kepha cishe ngaso sonke isikhathi i-DMZ isiza ukwenza ukuxhumana kusheshe futhi ngalokho kuthuthukise ulwazi lwethu lomdlalo wevidiyo, ikakhulukazi manje njengoba abasebenzisi abaningi bexhumeke kunethiwekhi efanayo nokuthi sinamadivayisi amaningi nge-WiFi ekhaya.
Umsebenzi DMZ ivumela ukuxhumana okuqondile phakathi kwenethiwekhi yangaphakathi nangaphandle. Lapho sabela i-FMZ ku-IP singasebenza ngokushesha ngoba wonke amachweba avulwe ngokuphelele ngokuzenzakalela (ngaphandle kokunye okugcinwe ngumhlinzeki noma umkhiqizi). Ngokomqondo, i-DMZ ithwala uchungechunge lwezingozi zokuphepha kepha siyakhumbula ukuthi kulokhu sizogxila kuphela ekuxhumaneni kwemidlalo yevidiyo, okuyiyona ngakho-ke bazosebenza ngasikhathi sinye ne-console yethu yomdlalo ngakho-ke kufanele silinganiselwe ngandlela thile maqondana nokubangela amaphutha ezokuphepha.
Ungayisetha kanjani i-DMZ ukuze ithuthukise i-lag
Kubalulekile ukuthi ukusebenzisa i-DMZ kahle kuyanconywa ukuthi ube nokuxhumeka ngentambo ye-LAN.
Into yokuqala esizoyidinga ukufinyelela ukucushwa kwe-router, ngoba lokhu sizokufaka elinye lalawa makheli amabili kusiphequluli sewebhu sefoni yethu ephathekayo noma i-PC:
Into ejwayelekile kakhulu ukuthi isicela igama lomsebenzisi nephasiwedi ukufinyelela i-router yenkampani yethu, Le datha ingaphansi komzila wethu, noma imvamisa ingaba okulandelayo:
1234 / umlawuli
iphasiwedi / iphasiwedi
umphathi / iphasiwedi
impande / impande
isuperuser / superuser
Uma sesingaphakathi, sizobheka inketho yokuthi "ukumiswa okuthuthukile" noma okufanayo ukuze sikwazi ukufinyelela kusixhumi sendabuko somzila. Lapho sikwazi ukufinyelela silandela umzila olandelayo: Ukusetha Okuthuthukile> I-NAT> I-Host ye-DMZ.
Lapha sizobona ibhokisi lokuqukethwe lapho kuzodingeka sinikeze i-IP, kulokhu sizokwabela i-IP yamahhala efana nenombolo esetshenziselwe ukufinyelela, Kunconywa ukwabela 192.168.1.XX lapho i- "XX" kuzoba yi-IP yekhonsoli yakho yegeyimu, Kamuva sizokufundisa ukuthi ungayabela kanjani ikhonsoli yakho i-IP engaguquki ukuze i-DMZ ihlale ifana nekhonsoli yomdlalo. Lapho sesinikeze i-IP, chofoza ku- "Save / Apply" bese sisebenzisa i-DMZ.
Ungayabela kanjani i-DMZ ku-PlayStation 4 yakho noma i-Xbox One
Nika i-IP engaguquki ku-PS4 yethu
Siya esigabeni Sezilungiselelo bese silandela indlela elandelayo: Inethiwekhi> Lungiselela ukuxhumeka kwe-inthanethi. Ngincoma ukuthi uye kuzilungiselelo> Inethiwekhi> Isimo sokuxhuma futhi uthathe amanothi noma isithombe semininingwane uma kwenzeka uguqula isimo.
Ufuna ukuxhuma kanjani kunethiwekhi? > Sikhetha inketho yethu
Ufuna ukumisa kanjani ukuxhumeka kwe-inthanethi? > Ngokwezifiso
Amasethingi ekheli le-IP> Manual
Etafuleni elilandelayo sizofaka idatha
I-IP yethu ye-DMZ ehleliwe: 192.168.1.xx / 192.168.0.xx
Isifihla-buso se-Subnet: 255.255.255.0
Isango elizenzakalelayo: 192.168.0.1 / 192.168.1.1
I-DNS eyinhloko: 80.58.61.250
I-DNS yesibili: 80.58.61.254
Ukuhlelwa kwe-MTU> Ngokuzenzekelayo
Iseva Yommeleli> Ungasebenzisi
Hlola uxhumano lwe-inthanethi
Manje siqinisekisa ukuthi ukuxhumeka kulungile, siyilinde ukuthi isinikeze imiphumela ye- «NAT 2» kanye nesivinini esihle sokuxhuma ngokwejubane esisitholile. Manje izohlala ixhumeka ku-DMZ ngokuzenzakalela.
Nika i-IP engaguquki ku-Xbox One
Kuthebhu General, Khetha Izilungiselelo Zenethiwekhi futhi ngemuva Izinketho ezithuthukile bhala amanothi noma izithombe zolwazi olukhonjisiwe ngaphambi kokuthi siqhubeke nokwabela i-IP engaguquki ku-Xbox yethu.
Izilungiselelo ze-IP> Manual
Cindezela u- «B» ukuze ubuyele esikrinini Sezilungiselelo Zenethiwekhi futhi izokwenza isheke lokuxhunywa kwe-inthanethi okuzenzakalelayo
Kubalulekile ukuthi yonke idatha efanele iboniswe ngakho-ke kufanele uqiniseke ukuthi uyifaka kahle. Nnoma kungenzeki lutho uma sehluleka ngoba singahlala sisetha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi ngokuzenzakalela futhi izolungisa noma yimaphi amaphutha.
Ungakuthuthukisa kanjani ukuxhumana kwami ​​emidlalweni yevidiyo
Sizokushiya lapha amanye amathiphu ukuze ukwazi ukuthuthukisa ukuxhumana kwakho emidlalweni yevidiyo futhi ngaleyo ndlela usebenzise ngokunenzuzo amahora wakho wokuzilibazisa noma ngabe ukuphi:
Bheka ukuthi opharetha wakho une «imodi yomdlalo», Ukuze wenze lokhu, shayela insizakalo yamakhasimende noma uhlole ukumiswa komzila wakho ufuna le modi, evame ukubizwa nge- "Fast Path".
Ngokufanelekile, ukugwema ukulahlekelwa yimininingwane nokunciphisa i-LAG kuhlala usebenzisa ukuxhumana kwekhebula, I-WiFi ayizinzile futhi igcwala kalula, uma ukwazi ukuxhuma i-game console yakho ngekhebula uzohlala uthola imiphumela engcono.
Zama ukumisa noma ukhawulele okulandiwe okwenzayo ngenkathi udlala imidlalo yevidiyo, ukulandwa komkhawulokudonsa kugcwalisa i-router.
Nciphisa inani lamadivayisi axhunywe kunethiwekhi yakho nge-WiFi.
Kungenzeka futhi ukuthi awunamakhono kulo mdlalo wevidiyo futhi ukuxhumana kuyizaba nje obeka kaningi lapho wenza i- "Quick" ku-Call of Duty, ngoba asinaso isixazululo okwamanje, kufanele uzijwayeze, uzijwayeze futhi uzijwayeze.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungavula kanjani amachweba futhi uthuthukise ukuxhumana kwakho emidlalweni yevidiyo
I-OnePlus 8 ne-OnePlus 8 Pro: imininingwane, intengo nokutholakala
Ama-headphone wokudlala amahle kakhulu azo zonke izintengo nezinkundla